Holy City eJerusalema has a umlando onothileko lihlonishwa amaJuda, amaSulumane namaKristu emhlabeni wonke. It ihlukaniswe yaba izingxenye eziningana. Esikhathini Idolobha izivakashi Old ungabona ukuthi cishe zonke ezikhangayo zendawo. It Ubuye yobuKristu, Armenia, Muslim imiphakathi yamaJuda. IMpumalanga Jerusalem - maphakathi isiko Arab, futhi West eJerusalema ingenye izindawo ngokushesha kakhulu uyanda. Lo muzi lihlala abantu abangaphezu kwengxenye yesigidi abantu. Amaholide eJerusalema iyathandwa emhlabeni wonke. Lena yindawo enhle kwezokuvakasha zamasiko nezomlando. Ngaphezu kwalokho, i-uhambo lwaminyaka yonke lapha izigidi zabantu. Kulomuzi kukhona amasonto amaningi, zezindela, izakhiwo ezindala, izindlu zikanokusho, iminyuziyamu kanye zobuciko. Izivakashi eJerusalema ungaya yaseshashalazini, vakashela International Film Festival, ebanjwa lapha bese uthatha yezitolo othakazelisayo.
EJerusalema amahhotela Abangefani sokujabulisa izivakashi nge Izinsiza yesimanje kanye nezinga amanani yonke isabelomali. Yiqiniso, uma ongaphakeme ngemali, izinkinga ne ukubekwa asivelanga noma kunjalo. Kulomuzi, inombolo ezanele Amahhotela okunethezeka ukuthi ahehe ukunethezeka ukujula umhlobiso. Kodwa kuthiwani uma lezi amahhotela eJerusalema ungakwazi ukukhokhela? Okuhle futhi edolobheni - lapha ungathola endaweni ukubeka at an ngentengo eqolo futhi ujabulele ejwayelekile ehloniphekile yesevisi. Izibuyekezo eJerusalema nhlobonhlobo. Nokho, njengakwezinye izindawo, abantu ngezinye izikhathi akhononde nokungcola amakamelo, inkonzo prohibitively ezibizayo, ekhishini abampofu noma abasebenzi akufanele ngokomsebenzi engiwenzayo. Kodwa lokhu namanje a rarity. Njengomthetho, ngisho abantu abahola ngezansi isilinganiso ungathola indawo ehloniphekile ukuze uhlale futhi ujabulele emkhathini imilingo lo muzi wasendulo.
Ngakho, lapho ukuhlala futhi uthole amanani aphansi kakhulu inkonzo izinga? I Alcazar Ihhotela liseduze kakhulu le Idolobha elidala. It has 38 amakamelo nge nethezekile furnishings nokubukwa enkulu yezindawo ongcwele. Lapha siyonikwa izinkambo amadlingozi Olufile, eBhetlehema, Kurman, eJeriko, waseNazaretha nakwezinye izindawo ezithakazelisayo.
Kunalabo amahhotela eJerusalema, lapho kahle ayeke abantu ibhizinisi. I yezivakashi Beit Ben Yehuda Inekamela umhlangano lovely ukuthi ifakwe umshini wokudlala vidiyo. Ungase futhi ujabulele ekhishini ifakwe ngokumangalisayo kanye wezincwadi omkhulu. Budebuduze kukhona konke okudingayo ukuze izivakashi: zamabhasi, izitolo nezindawo zokudlela.
Mount kwehhotela umndeni-run omnqumo etholakala eduze nezindawo ezingcwele okukhulunywa ngabo eBhayibhelini. Izivakashi ngeke aneliseke amakamelo ukhululekile futhi ihlanzekile nge yokugezela yangasese. Kube ngokuvamile ayeke labo abeza njengama-pilgrim.
HaShimi Ihhotela itholakala inhliziyo iDolobha Elidala. Itholakala isakhiwo mlando, okuyinto wakhiwa eminyakeni engaba ngu-400 edlule. Uzokujabulela wezangaphakathi wesimanje yehhotela enhle izitebhisi zemabula, isimo ezisebenza kanye phansi. A beige, omhlophe, burgundy negolide imibala ukudala isimo ngisho ebukekayo ngaphezulu. Lena cishe indawo elungile for holiday yakho.
HaShimi Ihhotela inikeza izinkambo abajabulisayo Israyeli, Egypt naseJordani. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukukhetha ukukhetha imisebenzi yokuzilibazisa ngezinga elingakanani futhi ngqo eJerusalema. Budebuduze kuyinto ukuvakasha abezinyawo Nahalat Shiva, kanye emakethe.
Zonke lezi amahhotela eJerusalema ukukunikeza iholidi at an ngentengo eqolo ukuthi ingeqi 70 euro ngosuku. Sinenkosi isigaba ezimbili inkanyezi, kodwa ngokuphelele akuphazamisi ezingeni kanye nekhwalithi yesevisi, elingaphakathi amakamelo ukhululekile.
Asikho isidingo ukuthatha dolobha yakwa-Israyeli, njengoba uhlobo ngilahlekile. Kuyinto idolobha lanamuhla, egcwele umoya Abantu nokuphila. Lapha uzothola ugxumela umoya adventure kanye magic.
"Podushkin" - Ihhotela (eMoscow): amakheli, izithombe, izibuyekezo
Singakwazi yini ukuphila ngaphandle izincwadi indoda